PSG Iyo Chelsea Oo kulanka Lugta Hore Ee Champions Leaque-ga Barbaro Ku Galay Garoonka PSG | Waayaha
You are here: Home 2015 February PSG Iyo Chelsea Oo kulanka Lugta Hore Ee Champions Leaque-ga Barbaro Ku Galay Garoonka PSG
Posted on February 18, 2015 by Ayuub Xudayfi | 0 Comments
Kooxaha PSG iyo Chelsea ayaa kulanka lugta hore ee Champions Leaque-ga heerka 16 ka kooxood ku kala baxay barbaro 1:1 ah. Chelsea ayuu goolka udhaliyay Ivanovic halka uu PSG goolka barbaraha u keenay Edinson Cavani. Inkasta oo ay qaybtii danbe ee ciyaarta PSG abuurtay fursado badan oo goolal loo fishay ayuu goolahayaha Chelsea ee Courtios uga dhaartay in ayna goolka danbe ka dhalinin. Kulanka lugta danbe ayaa lagu ciyaari doonaa guriga Chelsea ee Stamford Bridge.
Kooxda PSG ayaa garigeeda Parc de Princess ku soo dhawaynaysay kooxda Chelsea, waana xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ee ay PSG iyo Chelsea isku arkaan Champions Leaque-ga. PSG ayaa kulankan Chelsea soo dhawaysay iyada oo ay ka dhaawacanaayeen ciyaartoy aad kooxdeeda ugu muhiim ah.
PSG ayaa xili ciyaareedkii hore kulankii ka dhacay Parc de Princess ku soo guulaysatay 3:1, waxayse guuldaro 2:0 ay la kulantay kulankii lugta danbe ee Stamford Bridge. Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ku jirta qaab ciyaareed fiican waxayna isku diyaarinaysaa inay markan si ka fiican sidii xili ciyaareedkii hore kaa soo gudubto kooxd ree Paris.David Luisz ayaa markii ugu horaysay ka horyimid kooxdiisii hore ee chelsea.
Kulanka dhexmaray PSG iyo Chelsea ayaa ahaa kulan aad u adag, waxayna ciyaarty ku bilaabantay qaab ay labada kooxoodba muujinayeen taxdar aad u badan.Kadib markii 10 daqiiqo oo bilaa fursad ah la ciyaaray ayay PSG heshay laba fursadood oo ay goolka furitaanka kula iman gaadhay basle waxaa fursadahaa oo ay ka mid ahayd fursad halis ah oo uu Ibrahimovic sameeyay ka badbaadiyay Cheslea goolhaye Courtios.
Ugu danbayn Chelsea ayaa soo gabagabaysay ismariwaagii ciyaarta, waxayna daqiiqadii 36 aad latimid goolka furitaanka waxaana gool madax ah oo qurux badan udhaliyay Branislav Ivanovic , wuxuuna ciyaarta u badalay 1:0 ay Cheslea hogaanka kula wareegtay.Chelsea ayaa bartilmaameedeedii ugu horeeyay goolka ku dhashatay halka PSG saddex bartilmaameed oo ay samaysay uu Courtios ka badbaadiyay.
Goolkan ayaa wuxuu layaab ku lahaa in saddex difaac oo Chelsea ahi ka qayb qaateen, ugu horayn Azpilicuenta ayaa dhinca bidix kubbada ka soo qaaday, Cahil ayaana si fiican cidhib iksugu dhaafiyay waxaana dhamaystirka lahaa Ivanovic.Inkasta oo weerar badan PSG kaga jawaabtay goolka looga hormaray ayay hadda Chelsea iska difaacday halis kasta oo kaga timid weerarka PSG. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1:0 ay Chelsea hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay PSG bilawday inay iska soo celiso goolka qaybtii hore ee ciyaarta, waxayna markiiba bilawday inay fursado abuurto. Daqiiqadii 54 aad ayayna heshay goolka barbaraha, waxaana gool madax ah kooxdiisa ugu barbareeyay Edinson Cavani.
Kubbad ay dhinaca bixix ka soo wada ciyaareen Maxwell iyo Blaise Matuidi ayuu Matuidi kubbad fiican ka soo qaaday taas oo keentay in Cavani uu kooxdiisa ugu dhaliyo goolka barbaraha, ciyaarta ayaana noqtay barbaro 1:1 ah.
PSG ayaana markiiba bilawday qaab ciyaareed cusub.Waxayna Chelsea ku abuurtay dhibaato badan iyada oo dhawr jeer ku sigatay inay hogaanka ciyaarta qabato. Chelsea ayaana bilawday inay difaaca ku ururto.Fursada goolka loo fishay ayuu Courtios ka badbaadiyay Ibrahimovic.
Daqiiqadii 80 aad ayaa la fishay inay PSg latimid goolka labaad kadib markii uu Cavani inta uu difaaca Chelsea isku dhex yaaciyay uu arkay dadaalkiisa oo ku dhamaaday kubbada oo birta goolka wax yar u martay. waxayna ahayd fursad halis ah oo aan la rumaysan karin.
Laakiin fursad kasta oo PSG samaysay waxaa goolka Chelsea iska hortaagay Courtios oo qaab ciyaareed layaableh soo bandhigay.Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 1:1 ah, waxayna natiijadani wax fiican uga dhignayd Chelsea oo kulanka lugta danbe Stamford Bridge ku soo dhawayn doonta kooxda PSG
Ururka Hormarinta Sports-ka ee Dalka UK oo agab ciyaareed soo gaarsiiyay wasaradda Sports-ka Puntland (Sawirro)